UK free to recruit healthcare workers from Zimbabwe – Zimbabwe Daily
ENGLAND – The United Kingdom is free to recruit healthcare workers from Zimbabwe because the country is not on the World Health Organisation’s “red list” where international recruitment of healthcare workers is prohibited. Other southern African countries not on the list are: Botswana, Eswatini, Namibia, South Africa and Zambia.
Q &A: Lord Oates Liberal Democrat Lords Spokesperson (Energy and Climate Change): To ask Her Majesty’s Government what discussions they have had with the government of Zimbabwe about entering a partnership agreement concerning the recruitment of health care workers from that country.
ENGLAND - The United Kingdom is free to recruit healthcare workers from Zimbabwe because the country is not on the World Health Organisation’s “red list” where international recruitment of healthcare workers is prohibited. Other southern African coun...